10 Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka
Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Safarka tareenka Poland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
Qarsoon oo ka fog dad badan oo dalxiisayaal ah, kuwan 10 meelaha ugu midabka badan aduunka, runtii waa dhiirigelin. Fanaaniinta iyo qorayaashu waxay ka heleen dhiirigelin meelahan midabka leh. Sidaas, Sheekooyinku run bay noqdaan, Booqashada mid ka mid ah meelahaasna waxa hubaal ah inay adigana kuu noqon doonto waayo-aragnimo nololeed oo beddeleysa.
1. Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka: Cinque Terre, Italy
Maalinta jiilaalka cawlan ama maalinta xagaaga barafka-barafka leh, Cinque Terre waa midabka cimilada kasta. Guryaha quruxda badan waxay leeyihiin muuqaal badda buluuga ah waxayna abuuraan sawirka ugu midabka badan. Waxaa intaa dheer, Tuulo kasta oo aad booqato Cinque Terre way ka midab badan tahay tan kale, iyadoo guryo lagu rinjiyeeyay jaale, pink, casaan, iyo codadka oranji.
Sidaas, oo ay la socdaan badda buluugga ah iyo buuraha cagaaran, gobolka Cinque Terre ee Talyaaniga waa mid ka mid ah meelaha ugu midabbada badan adduunka. Safarkan midabka leh ayaa dhab ahaantii ka bilaabmaya magaalada La Spezia, magaalo deked weyn iyo barta laga baxo ee tareenka Cinque Terre. Ku safrida Cinque Terre tareen ayaa ugu fiican tan iyo tareenku tuulooyinka mid walba, si aad u tagto oo aad ugu noqoto goob kasta markasta oo aad rabto inta lagu jiro maalinta.
2. Beeraha Tulip, Netherlands ayaa
Pink, white, oranji, guduud, Beeraha tulip ee Holland waa sixir midabbada qaansoroobaad kasta. Meesha ugu fiican ee lagu arko beeraha tulip -ka ee cajiibka ah waa Keukenhof waxaadna ku raaxaysan kartaa quruxda lacag la’aan. Beerihii cajiibka ahaa ayaa shan iyo toban daqiiqo ka socda Keukenhof. Si kastaba ha ahaatee, Runtii qurux naadir ah waxay sii socotaa shan iyo toban daqiiqo oo kale ilaa xitaa tulip ka sii qurux badan.
Waxaad ku raaxeysan kartaa aragtidan midabka leh inta u dhaxaysa Abriil ilaa badhtamaha May, inta lagu guda jiro tulips’ magooli. Beeraha waaweyn ee tulip waa safar gaaban oo ka yimid Amsterdam, sidaas darteed waxay noqon doontaa mid cajiib ah maalinta safarka Holland’ baadiyaha. Intaa waxaa dheer, waxaad kiraysan kartaa baaskiil sida dadka deegaanka si aad ula dhacdid ubaxa xiisaha leh.
3. Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka: Menton Cote D'Azur, France
Xeebaha Riviera ee quruxda badan ee Faransiiska, laakiin ka fog paparazzi Monte Carlo, Menton waa magaalo xeebeed firfircoon oo cajiib ah. Guryaha pastel ee Belle Epoque, wax ku darso quruxda tuuladan riyooyinka leh oo ku raaxayso booqde kasta oo ugu horreeya.
Waxaad ka heli kartaa Menton meel kasta oo ka mid ah Faransiiska ama Talyaaniga maadaama ay aad ugu dhowdahay xadka Talyaaniga. Cote D'Azur waa gobol aad u qurux badan oo ku yaal Faransiiska wuxuuna u sameeyaa meel aad u fiican oo loogu talagalay nasashada. Sidaas, marka lagu daro samaynta sawiro waa weyn oo ku yaala gadaasha magaalada midabka leh, socdaalka dalxiiska waa siyaabo aad u fiican oo lagu qaato fasax la yaab leh Menton.
Magaca magaalada oo magaalo dhexdeeda ah, ah bartamaha magaalada hore Pelourinho ee Salvador waa mid ka mid ah meelaha ugu midabka badan adduunka. Goobta hal mar loogu talagalay xaraashka addoonta ayaa maanta ah meesha ugu midab iyo xamaasad badan Salvador. Aaggu wuxuu leeyahay wajiyo midab leh oo dhismayaal gumeysi ah waxaana hoy u ah fanaaniinta, fannaaniin, iyo cawayska weyn.
Waxaa intaa dheer, Pelourinho oo midab leh waa xarun dhaqammo kala duwan ah oo aad ka baran karto dhaxalka Brazil iyo Afrika. The makhaayadaha waa weyn Pelo waxay ku bixisaa suxuun fantastik ah oo ka yimid labada cunnooyinka. Sidaas, ka dib markaad dhammeysato dukaamaysiga alaabta xusuusta ee dukaamada badan ee gacanta lagu sameeyo, waxaad dhadhamin kartaa cuntada cajiib ah Cunnooyinka Afrika iyo Brazil.
5. Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka: Wroclaw, Poland
Magaalada ugu weyn Galbeedka Poland, Wroclaw waa mid ka mid ah dahabka qarsoon ee Poland. Wroclaw waa mid soo jiidasho leh meel ka baxsan wadada-garaacay in Europe, iyo qaab-dhismeedkeeda midabka leh ayaa ka dhigaya mid ka mid ah magaalo qurux badan in Europe. Meesha ugu midabka badan ee suuqa dhexe ee dhexe, halkaas oo aad ka qaadan karto jawiga firfircoon ee mid ka mid ah makhaayadaha ku wareegsan.
Sidaas, hubi inaad kaameerahaaga qabsato iyo kabaha socodka wanaagsan ee socodkaaga ee waddooyinka midabka leh iyo magaalada duugga ah. Laga bilaabo jiilaalka ilaa xagaaga, Wroclaw ee midabka leh ayaa kugu soo dhaweynaya soo dhaweyn diiran, iyo pierogi Polish oo baradho ka buuxaan, cheese, ama miro.
6. Jasiiradda Burano, Italy
Mid ka mid ah saddexda jasiiradood ee caanka ah ee u dhow Venice, Burano waa midabka midabka leh ee u dhexeeya saddexda jasiiradood ee Talyaaniga ee qurxoon. A doon safar ka fog dhul weynaha, Guryaha dhalaalaya ee Burano waa kuwo aad u fiican meel ka baxsan xilli-xilliyeedka fasaxa. Intaad ku hareeraysan karto jasiiradda 2 saacadood, waxaad ku dhamaan doontaa inaad qaadato maalin dhan, kaliya sawiro.
Kalluumaysatada soo jiidashada leh waxay ku nool yihiin hareeraha buundooyinka oo ay weheliyaan kanaalo badan oo ku kordhiya quruxda Burano. Kani wuxuu ku darayaa sawirka u eg kaarka boostada mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 5 meelaha midabada leh ee Yurub. Booqashada Burano waa safar maalin weyn oo ka socda Venice, u fiican dukaamaysiga shalash iyo cabitaanka galabtii Aperol oo leh aragtiyo harada Venetian.
7. Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka: Nyhavn, Copenhagen
Dekadda quruxda badan ayaa mar dhiirigelisay mid ka mid ah qorayaasha buugaagta carruurta ugu waaweyn inay qoraan Princess iyo Digir. Haa, maya. 20 Guri-magaaleedka waxa uu ahaan jiray deenishka Hans Christian Andersen. Nyhavn midabkeedu wuxuu ahaa deked dhexe oo firfircoon, halkaas oo aad ka maqli kartay badmaaxayaasha’ ku hadla luqad kasta.
maanta, Nyhavn oo la cusboonaysiiyay ayaa ah meesha ay dadka deegaanka u yimaadaan si ay ugu nastaan ​​dhamaadka maalinta. Casho leh muusig jazz ah, daawashada qorrax dhaca doomaha iyo guryaha magaalada ee midabka leh, waa waayo-aragnimo cajiib ah.
Albaabada leh, derbiyada, saqafyada saqafyaduna waxay leeyihiin midabyo kala duwan, Magaalada Guatape waa magaalada ugu midabka badan Colombia. Magaaladan midabka leh waa magaalo loo tamashle tago oo ku taal Colombia, oo leh muuqaalo cajiib ah iyo buuro. Sidaa darteed, ah muuqaal cajiib ah magaalada oo dhan iyo midabkeeda, Waxaad kori kartaa ilaa La Piedra del Penon, iyo xagga sare ee 740 Tallaabo aragtida yaabka leh ee meesha ugu midabka badan adduunka ayaa kuu furaysa.
Si kastaba ha ahaatee, qaybaha ugu quruxda badan ee magaalada waxay ku yaalaan Zocalos, qaybaha hoose ee guryaha. Zocalos waa qurxinta gacanta lagu rinjiyeeyay, rinjiyeynta xayawaanka ama ubaxa qaarkood, iyo kuwo kale ayaa si fudud u ah qurxinta midabada leh. Si aad u soo gabagabeyn, qorshee ugu yaraan dhowr maalmood’ safarka Guatape si aad u sahamin karto jidadka aduunka ugu quruxda badan uguna midabka badan.
9. Meelaha Ugu Midabada Badan Adduunka: Colmar, France
Guryo kala bar midab leh, kanaalka ubax-qurxinta, Colmar waa magaalo qurux badan oo Faransiis ah halkaas oo sheeko-xariiradu ay nolosha u soo gashay. Kanaalada quruxda badan ayaa ku hogaamin doona luuqyo qurux badan oo galay fagaarayaal furan. halkan, kalluumaysatadu waxay fadhiisan jireen oo ay ka sheekayn jireen tacaburrada maalinta iyo sheeka-badeedka.
Waxaad Colmar ka iman kartaa Basel ee Switzerland ama magaalo kasta oo weyn oo ku taal Faransiiska, tareen. Sidaas, Booqo Colmar ee safarkaaga fasaxa Yurub. Doorasho kale oo weyn ayaa ah inaad fasaxaaga oo dhan ku qaadato Colmar oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu sameeyo Colmar marka laga reebo in sawir laga qaado meesha ugu midabka badan ee Faransiiska. Tusaale ahaan, marada kanaalka, wax iibsiga ee suuqa daboolan, iyo dhadhanka khamriga Alsace.
Paris ilaa Colmar oo leh Tareen
Zurich ilaa Colmar oo leh Tareen
Stuttgart ilaa Colmar oo wata Tareen
Ku qarsoomay dooxa cagaaran, kaliya 2 saacado ka Tangier, waa dhagaxa ugu buluuga ah uguna qaalisan Chefchaouen. Ku rinji buluug iyo caddaan, oo leh qurxiyo midab leh, Chefchaouen waa meesha ugu dhalaalaysa Morocco. Si la mid ah jasiiradda Giriigga ee Santorini, Waddooyinka quruxda badan iyo qaab-dhismeedku waxay soo jiitaan socotada ugu halista badan.
Halyeeyada ayaa sheegaya in doorashada midabka gaarka ah ay dib u soo laabaneyso qarnigii 15aad markii dadka Yuhuuda ay ku noolaayeen magaaladan yar. Sidaa darteed, midabka buluuga ah waxa uu astaan ​​u yahay cirka iyo xidhiidhka ilaah. Halka dadka Yuhuuda aanay hadda deganayn magaaladan yar, si kastaba ha ahaatee meeshu waxay ilaalinaysay bilicdeeda sanadaha oo dhan. maanta, magaaladan yar ayaa soo jiidata kumanaan dalxiisayaal ah, Markaa u diyaar garow inaad la kulanto dad aad u faraxsan oo ku wareegsan gees kasta oo buluug ah.
Waxaan ku Save A tareenka waxay ku farxi doontaa inay kaa caawiso qorsheynta safarka aad 10 meelaha ugu midabka badan aduunka.
Ma doonaysaa in aad ku dhejiso boggaaga boggaga "10ka meelood ee ugu midabada badan aduunka"? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-colorful-places-world%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Midab leh ColorfulCities ColorfulPlaces ColorfulTowns Mostcolorfulcitiesineurope mostcolorfulplacesworldwide